Accueil Ny fiainam-piangonana Formalités Mariazy
Ny olona, lahy sy vavy, mangataka ny hitsofan-drano ao am-piangonana ny fanambadiany dia tsy maintsy vita soratra ara-dalàna eo anatrehan’ny Fanjakana. Mitondra ny taratasy fanamarinana an’izany izy eo anivon’ny Fiangonana.
- Mihaona amin’ny mpitandrina
- Antsoina in-telo ao am-piangonana ary haseho amin’ny fiangonana amin’ny fiantsoana faha-telo farany.
- * Raha misy mpivady tsy mitovy foto-pinoana dia ilàna fankatoavana avy amin’ny mpiandraikitra ny fiangonana niaviny. Raha misy olona tsy afaka manome izany fanamarinana izany dia manao fanekena izy fa hanaraka ny foto-pinoan’ny fiangonana manatanteraka ny fitsofan-drano ny fanambadiany.
(Fenoina ary haverina 1 volana alohan’ny andro handraisana)
Andriamatoa :.............................................................................................. ................... ............................................................................
Vita batisa : eny sa tsia
Mpandray fanasan’ny Tompo : eny sa tsia
Ramatoa :................................................................................................... ....................................................................................................
Vita batisa : eny sa tsia Mpandray fanasan’ny Tompo : eny sa tsia
Finoana* : ...............................
Adiresy :.................................................................................................. ..............................................................................................
Telefonina (raha azo atao) :.........................
Fiangonana niaviana teo aloha :..........................................................................
Ireo vavolombelona : .................................................................................... ............
........................................................................ ................................................................................... .............
Daty : .................................